မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် Virtual ရုံး
တတ်နိုင် Virtual ရုံး in Melbourne သင့်ရဲ့အဘို့ virtual ရုံးလိပ်စာ မဲလ်ဘုန်းမြို့, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကို virtual လိပ်စာ မဲလ်ဘုန်းမြို့, virtual ရုံးခန်း မဲလ်ဘုန်းမြို့, အွန်လိုင်းရုံး မဲလ်ဘုန်းမြို့, virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး သြစတြေးလျ၌တည်၏။
Virtual ရုံး သြစတြေးလျ | Virtual ရုံးလိပ်စာ သြစတြေးလျ | စီးပွားရေးအတွက်စကားဝှက်လိပ်စာ သြစတြေးလျ | Virtual ရုံးခန်း သြစတြေးလျ | အွန်လိုင်း Virtual ရုံး သြစတြေးလျ | virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ သြစတြေးလျ | Virtual Workspace သြစတြေးလျ၌တည်၏။
ဘာလို့ Melbourne မှာ virtual office လိပ်စာရှိရမှာလဲ။
မဲလ်ဘုန်းမြို့သည်လူ ဦး ရေ ၄.၉ သန်းရှိပြီးသြစတြေးလျနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့သည်သြစတြေးလျ၏အကြီးမားဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ၏ရုံးချုပ်ဖြစ်သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၂၁ ခုမြောက်အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးဘဏ္centerာရေးစင်တာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့သည်သြစတြေးလျ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးစက်မှုစင်တာဖြစ်သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့သည်သြစတြေးလျ၏အကြီးမားဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ဌာနချုပ်တွင်တည်ရှိသည်။ နိုင်ငံတွင်အကြီးမားဆုံး ၁၀ ခုအနက်ငါးခု (ဝင်ငွေပေါ် မူတည်၍) နှင့်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးခုနစ်ခုအနက်ငါးခုပါဝင်သည်။
လူသိများသောinရိယာတွင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောစီးပွားရေးလိပ်စာရှိခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုအပြုသဘောဆောင်စေသည်။ Virtual Office တစ်ခုရှိနေခြင်းကြောင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်တရားဝင်စီးပွားရေးပုံရိပ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သေချာစေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်တိုးမြှင့်ပေးပြီးသင့်အား ပို၍ ချဉ်းကပ်ရလွယ်စေသည်။
စျေးကွက်အသစ်များသို့တိုးချဲ့ရန်ရည်ရွယ်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လည်း virtual office ကိုအသုံးပြုကြလိမ့်မည်။ ၄ င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်နေရာအသစ်သည်ဒေသတွင်းတည်ရှိမှုကိုပြသသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤသို့သောစီးပွားရေးလိပ်စာသည်သင်၏ငှားရမ်းရန်အရင်းအမြစ်များရှိကြောင်းအထင်ကြီးစေသောပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်နေရာတွင်ရုံးခန်းဖွင့်ပြီးသင်၏စီးပွားရေးကိုအမှန်တကယ်ထက်ကြီးစွာကြည့်ရှုရန်ဖွဲ့စည်းသည်။ ၎င်းသည်အသေးစားနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များအတွက်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်အသစ်ဖြစ်သော်လည်းယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တည်နေရာနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်သည်ပြိုင်ဘက်များကိုထိပ်ဆုံးမှ ဦး ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်အလုပ်ခွင်တွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာနေသည်။ virtual office သည် Melbourne ၏လိပ်စာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အက္ခရာများ၊ အထုပ်များလက်ခံခြင်း၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်စီးပွားရေးကဒ်များတွင်ဖော်ပြထားခြင်းစသည့်စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏လိပ်စာတွင်သင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတည်နေရာမထားကြောင်းသင်၏ဖောက်သည်များသိမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုလိပ်စာသို့ပေးပို့သည့်မည်သည့်စာကိုမဆိုသင့်ထံချက်ချင်းပေးပို့လိမ့်မည်။
ရုံးခန်းတစ်ခုသို့ ၀ င်ရန်မလိုဘဲသင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောအချက်အလက်များအပြင်၎င်းသည်ရိုးရာကြီးထွားမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကင်းသည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Virtual Office ဆိုသည်မှာသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲသင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ၊ အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုရရှိရန်တတ်နိုင်။ ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Virtual ရုံးများသည်လုပ်ငန်းစတင်ရန်တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို virtual လိပ်စာသည်သင်၏မြို့တည်ရှိသည်တည်ဆောက်နှင့်သင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။
virtual office ၏သဘောသဘာဝကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန်အတွက်ရုံးရုံးခန်းသည်ရုံးခန်းနေရာမရှိဘဲရုံးခန်းလိပ်စာကိုပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတည်ရှိနေစဉ်သင်အဝေးမှနှင့်နီးပါးအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
Virtual ရုံးများသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်အားမြို့တွင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောစီးပွားရေးလိပ်စာတစ်ခုရှိစေရန်နှင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိသင့်အိမ်မှအလုပ်လုပ်ရန်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။
Melbourne တွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည် Melbourne ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရုံးခန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်းနှင့်နေရာတစ်ခုတွင်ငှားရမ်းခြင်းမပြုရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးသည်။ Melbourne ရှိ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး Melbourne ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေသည်။ Melbourne ရှိ virtual ရုံးသည် Melbourne ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိနာမည်ကြီးစီးပွားရေးလိပ်စာများကိုသင်နှင့်အတူပါလာသောကြီးမားသောငှားရမ်းခများကိုမပေးဘဲသင်ပေးဆောင်သောကြောင့်ရုံးခန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ Virtual ရုံးခန်းဖြစ်သောမဲလ်ဘုန်းမြို့သည်သင့်အားစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုအနိမ့်ကျသက်သာစေနိုင်သည်။ Virtual office space ကိုယူခြင်းအားဖြင့် Melbourne ကို Melbourne ရှိ virtual office အနေဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောရုံးခန်းသို့ပြောင်းစရာမလိုဘဲ Melbourne ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်နိုင်လိမ့်မည်။ Melbourne Virtual ရုံးသည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရိုးရာစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် virtual office လိပ်စာရှိသည့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ Melbourne သည်သင်၏ package နှင့်စာတိုက်မေးလ်များကိုဘယ်နေရာသို့မဆိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုဘဲ Melbourne ရှိ virtual ရုံးများ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါ။ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Melbourne virtual office သည်သင့်အားကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကဘာလဲ။
တစ်ဦးရှိခြင်းသည် မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ကို virtual ရုံး မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကမ္ဘာကြီးကိုရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာအဖြစ်လူသိများတဲ့မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ virtual ရုံးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်စျေးကြီးသောငှားခများကိုမပေးဆောင်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ Melbourne ရှိ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး Melbourne ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင် virtual office Melbourne သည် Melbourne ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်Australiaစတြေးလျ၌ရုံးခန်းငှားရမ်းခကိုမပေးဘဲ Melbourne ရှိစီးပွားရေးလိပ်စာကိုပေးဆောင်ရန်အတွက်ရုံးခန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြသည်။ Virtual ရုံးခန်းဖြစ်သောမဲလ်ဘုန်းမြို့သည်သင့်အားစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုအနိမ့်ကျသက်သာစေနိုင်သည်။ Virtual office space ကိုယူခြင်းအားဖြင့် Melbourne ကို Melbourne ရှိ virtual office အနေဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောရုံးခန်းသို့ပြောင်းစရာမလိုဘဲ Melbourne ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်နိုင်လိမ့်မည်။ Melbourne Virtual ရုံးသည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရိုးရာစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ virtual ရုံးလိပ်စာရှိခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာသင်သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရုံးခန်းနေရာများသို့မဟုတ်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Workspace တွင်ရရှိခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ရရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျအတွက်ဘယ်နေရာကိုမှပြောင်းစရာမလိုဘဲမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစာတိုက်မေးလ်များနှင့်လူအများအပြားတို့သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရုံးခန်းများလိုအပ်သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Melbourne virtual office သည်သင့်အားကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
Melbourne ရှိ Virtual Offices များသည်သင့်အားအပိုအားသာချက်များအနည်းငယ်ပေးသည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအမြဲတမ်းစွဲမှတ်စေမည့်အကျိုးရှိသည့်နေရာတွင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏ Virtual ရုံးလိပ်စာ။
သင်သည်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကိုသင်၏စီးပွားရေးအခြေစိုက်စခန်းအသစ်လုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Virtual Office ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏
မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် Cloud Storage
Virtual Office အတွက်မဲလ်ဘုန်း, Package
မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်ပစ္စည်း (၂၀) ​​အထိလက်ခံရရှိထားခြင်းမရှိပါ
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစာအိတ် ၁၀ လုံးအတွက်အခကြေးငွေမရှိပါ
မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာ ၃ ခုအတွက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအတွက်အခကြေးငွေမပေးပါ
ရက်ပေါင်း ၂၀ အထိမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအခမဲ့စာတိုက်သိုလှောင်မှု
သြစတြေးလျရှိ Virtual ရုံးခန်းနေရာအတွက်သင်၏မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Virtual ရုံးတည်နေရာ
4/800 Collins St, Docklands VIC 3008
Melbourne ရှိ Virtual Office အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Virtual ရုံးအတွက်အသုံးပြုခပိုယူသည် မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏
ရယူ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ virtual ရုံးအပေါငျးတို့သမရှိမဖြစ်သာယာအဆင်ပြေမှုများ စျေးသက်သာစျေးနှုန်းမှာ
ကန့်သတ် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ရုံးခန်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) သြစတြေးလျရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ရုံးခန်း ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် virtual office ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) သြစတြေးလျမှသို့မဟုတ်သို့သွားသောစက်မှုထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ virtual လိပ်စာအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသြစတြေးလျဥပဒေအရအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။
သြစတြေးလျားနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ရုံးခန်းလိပ်စာအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုသြစတြေးလျားမှသို့မဟုတ်၎င်းမှသို့မဟုတ်သို့သွားသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ဒီဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်သြစတြေးလျရှိသို့မဟုတ်မှသြစတြေးလျရှိလူ၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (များ) ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်သြစတြေးလျ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် virtual po box ဝန်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူ့သို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုသြစတြေးလျားရှိ၊
သြစတြေးလျားနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် virtual mailing address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်သြစတြေးလျားရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေ၊
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်းအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်သြစတြေးလျရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမထားပါ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ရုံးခန်းများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်အကောင်းဆုံး virtual address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကို Pyramid အရောင်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသောသြစတြေးလျားရှိကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်းအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောသြစတြေးလျားရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သြစတြေးလျားနိုင်ငံများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ယနေ့သြစတြေးလျ၌သင်၏ virtual ရုံးကိုရယူပါ။
virtual address ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အရေးကြီးသောမှတ်စု မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏
virtual ရုံးမှန်ဆောင်မှုများ မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏
ကျနော်တို့စျေးသက်သာ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in Melbourneအဖြစ်ကိုလည်းသိ ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ မဲလ်ဘုန်းမြို့, virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု မဲလ်ဘုန်းမြို့, virtual ရုံးကုမ္ပဏီ မဲလ်ဘုန်း, စာပို့ဝန်ဆောင်မှု မဲလ်ဘုန်းမြို့, ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု မဲလ်ဘုန်းမြို့, ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု မဲလ်ဘုန်းမြို့, စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု မဲလ်ဘုန်းမြို့, virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏ ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် မဲလ်ဘုန်း, ကို virtual po box ကိုဝန်ဆောင်မှု မဲလ်ဘုန်း, ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု မဲလ်ဘုန်း, virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု မဲလ်ဘုန်း, ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု မဲလ်ဘုန်းမြို့, ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြသည် ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in ၾသစေတးလ်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ သြစတြေးလျမှာ virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု သြစတြေးလျမှာ ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု သြစတြေးလျမှာ စာပို့ဝန်ဆောင်မှု သြစတြေးလျမှာ ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု သြစတြေးလျ၌, ကျွန်တော်တို့ရဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် သြစတြေးလျမှာ စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု သြစတြေးလျမှာ ကို virtual PO box ကိုဝန်ဆောင်မှု သြစတြေးလျမှာ ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု သြစတြေးလျမှာ virtual ရုံးကုမ္ပဏီ သြစတြေးလျမှာ virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု သြစတြေးလျမှာ virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် သြစတြေးလျမှာ ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု သြစတြေးလျ၌တည်၏။ အဖြစ် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး မဲလ်ဘုန်း၌တည်၏။
Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ သြစတြေးလျ | Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏
ပို၍ ထူးခြားသည် မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များ
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်အောင်မြင်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအခွန်နှုန်းထားများကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကုမ္ပဏီနှင့်ဖြစ်သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တင်ပို့ခြင်း၊ မဲလ်ဘုန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ HR အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းများကိုကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏မဲလ်ဘုန်းအတွက်အထူးပြုမှုနှင့်မဲလ်ဘုန်းအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကိုပြီးပြည့်စုံအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသူနှင့် Melbourne အတွက်အကောင်းဆုံးသောအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများဖြင့် Melbourne အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးသောအဖြေများပေးရာတွင် Melbourne အတွက်မိတ်ဖက်များဖြစ်သည်။
NetherLands နှင့် US အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီ၏အထောက်အပံ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ထို့အပြင်တစ် ဦး အဖြစ်လူသိများမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိတစ် ဦး ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း စင်ပေါ်ကုမ္ပဏီ မဲလ်ဘုန်းမြို့သို့မဟုတ်အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းMelbourne မြို့သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအိုမင်းခြင်းအတွက်“ စင်ပေါ်တင်ခဲ့သည်” ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ (နိုင်ငံတကာအလေ့အကျင့်) ။ စီးပွားရေးမရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိပါ။
Melbourne တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ပထမခြေလှမ်းမှာ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြသည်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏။ ပထမ ဦး စွာ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ရရှိနိုင်မှု မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် check လုပ်ထားပြီးတော့အဘို့အစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည် သင်၏လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်လွယ်ကူသောဖြစ်စဉ်ကို!
ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် မဲလ်ဘုန်းမြို့, စီးပွားရေးဘဏ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း - မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တဲ့အခါမှာလုပ်ရမယ့်အရေးအကြီးဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ စီးပွားရေးဘဏ်အကောင့် မဲလ်ဘုန်းမြို့၌သင်၏အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည် startup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုခြေရာခံရန်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအခွန်ကောက်ခံမှုကိုရိုးရှင်းစေပြီးမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏ကုမ္ပဏီအောက်ရှိငွေပေးချေမှုများကိုလွယ်ကူစေသည်။
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း မဲလ်ဘုန်းမြို့မှတိုးတက်မှုနှုန်း ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် မဲလ်ဘုန်းမြို့အပြင်ဘက်မှာမင်းရဲ့အဖြေကမဲလ်ဘုန်းမြို့အပြင်ဘက်မှာတောင်ပံတွေကိုဖြန့်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ မင်းကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့မှာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးနိုင်တယ် သင်၏နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကိုစတင်ပါ မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ။
ဖွင့်လှစ် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစလုပ်ပါ မဲလ်ဘုန်းမြို့နှင့်ရှာကြသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်၎င်းကိုဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ။ သင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ခြင်း၊ မဲလ်ဘုန်းရှိအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့မှမည်သည့်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစီစဉ်နေသည်မဟုတ်ကြောင်းပြသရန်မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်သည်အကောင့် မဲလ်ဘုန်းနှင့် ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာ မဲလ်ဘုန်းမြို့အဘို့
eCommerce ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် Melbourne အတွက် All-In-One ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေပေးချေရန်တံခါးပေါက် နှင့် ကုန်သည်အကောင့် စတင်ဖွင့်လှစ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့သည်ရှုပ်ထွေးနေနိုင်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်မဟုတ်ချေ။ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ငွေပေးချေရမည့်ဂိတ်တံခါး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ် မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာ - သင်တစ် ဦး လျှင် eCommerce ကုန်သည် မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏
ကျော်များအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် 170 နိုင်ငံများ
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကုန်သည်အကောင့် - ငွေကြေး ၂၀၀ လက်ခံပါ
ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပါ ထက်ပိုမိုထံမှမဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏ 300 ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကိုဝယ်ပါ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်ပါ Melbourne.To ၌တည်၏ စီးပွားရေးစတင်ပါ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းကိုလည်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
စီးပွားရေးရောင်းအား မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်လူတစ် ဦး သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကုမ္ပဏီရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေဖြစ်ပျက်သည်။
သငျ့လျြောသော ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမရောင်းခင်ကတည်းကဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများဖြစ်သည်။ ပါတီများက ၀ င်ရောက်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုသတိပြုရမည် စီးပွားရေးရောင်းချခြင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့နှင့်နောက်ကွယ်မှဥပဒေရေးရာသက်ရောက်မှု၌တည်၏။
အကောင့်များ Outsourcing မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏
အကောင့်များ outsourcing ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကမ်းလှမ်းမှုများကသင့်အားမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စေရန်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိဘဏ္indicatorsာရေးညွှန်းကိန်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
- စာရင်းကိုင်ဝန်ဆောင်မှု မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိတည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့မှအီးယူအတွက်ဘဏ္licensာရေးလိုင်စင်အတွက်လိုအပ်လျှင်သို့မဟုတ်မဲလ်ဘုန်းမြို့မှဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်ကမ်းလွန်လိုင်စင်၊ Crypto လဲလှယ်ခြင်းအတွက်လိုင်စင်နှင့် ICO သို့မဟုတ်မဲလ်ဘုန်းမြို့မှလောင်းကစားလိုင်စင်များအတွက်အကူအညီလိုအပ်လျှင်
Virtual Number (VoIP) မဲလ်ဘုန်းမြို့အဘို့
VoIP ကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများ ဘို့ နှစ်ခုလုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မဲလ်ဘုန်းမြို့နှင့်လူနေအိမ် VoIP ၌တည်၏။
Virtual နံပါတ် မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် 89 နိုင်ငံများ | 290 အမြို့မြို့
သင်၏လုပ်ငန်းသည်မဲလ်ဘုန်းမြို့သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကောင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့ (သို့) အခြားဘယ်နေရာမှာမဆို၊ ဒီဂျစ်တယ်ရှိနေခြင်းဟာပျောက်နေတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ HR ကိုမဲလ်ဘုန်း၊ အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးတွင်အသုံးပြုပါ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုများ, အခွက်တဆယ်ဝယ်ယူမှု မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ စုဆောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို outsourcing မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်အလုပ်ခွင်တွင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိသည်
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းမဲလ်ဘုန်းမြို့ (HR) ပေါင်းအခမဲ့ယောဘသည် Portal ကို မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ဝင်ရောက်ခွင့်
Talent Acquisition မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏
Talent Acquisition သည်အဆင့် ၃ ဆင့်ပါ ၀ င်သောမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘက်စုံ၊
- စုဆောင်းသည် မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားသူ
- ရွေးချယ်ပါ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားသူ
- ဘော်ဒါတွင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားသူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် Talent Acquisition မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရာထူးများကိုဖြည့်စွက်ရန်မဟုတ်ဘဲမဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်သာမကသင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီရန်ကူညီနိုင်မည့်မဲလ်ဘုန်းမြို့မှဖြစ်စေနိုင်ငံတကာတွင်ဖြစ်စေမဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်မဟာဗျူဟာကျကျဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် Outsourcing မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏ (RPO)
ကျနော်တို့ပေး စုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုပြင်ပ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရန်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိဝန်ဆောင်မှုကို။
RPO ပံ့ပိုးပေး လူသိများတဲ့မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်မဲလ်ဘုန်းမြို့၌အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း Outsourcing ပံ့ပိုးသူသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်တိုးချဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် HR မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ဘက်စုံငှားရမ်းဖြေရှင်းချက်ပေး။ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ RPO ပံ့ပိုးသူသည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိလိုအပ်သော ၀ န်ထမ်းများ၊ သင်၏စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့၌သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့်နည်းစနစ်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
(ဒီတစ်ခုအဘို့ဖြစ်၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်အမှန်ပင်ရှာဖွေနေသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ မဲလ်ဘုန်းမြို့)
အကယ်၍ သင်သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်အလုပ်အကိုင်နေရာရှာနေသူ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအတွေ့အကြုံရှိအလုပ်များ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအလုပ်များ၊ မဲလ်ဘုန်းရှိအိုင်တီအလုပ်များ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအလုပ်အကိုင်နေရာများ၊ မဲလ်ဘုန်းရှိလုံခြုံရေးအလုပ်များ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရောင်းဝယ်ရေးအလုပ်များ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရာသီအလိုက်အလုပ်သမားများ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအလုပ်အကိုင်များ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အလုပ်များ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်များ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုပိတ်ပင်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့တွင်မဲလ်ဘုန်းမြို့နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာ ၁၀၆ ခုတွင်အလုပ်ရှာဖွေရန်အတွက်အထောက်အကူပြုသောမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအလုပ်ရှာဖွေရေးဆိုဒ်များရှိသည်
HR အတိုင်ပင်ခံသည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောလိုအပ်ချက်များကို တွေ့ဆုံ၍ မဲလ်ဘုန်းမြို့၌သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်သောအခါများစွာကူညီနိုင်သည်။
လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် အတိုင်ပင်ခံ ငါတို့အားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည် Melbourne တွင်သင်၏ HR အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက်အထူးအလုပ်ဖြစ်သော HR လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
အမှန်စင်စစ်အလုပ်အကိုင်များ နှင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်အရေးပါသောသဘာဝဖြစ်ကြောင်းမဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်နေရာလွတ်, အလျင်အမြန်ငှားရမ်းရန်ကူညီပေးသည်။
- ၁၀၅ နိုင်ငံနှင့်မဲလ်ဘုန်း - နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ။
အကောင်းဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ HR အလေ့အကျင့် မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အတူအတွေ့အကြုံကို စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြား မဲလ်ဘုန်း၌တည်၏။
ထုတ်လုပ်သူသန်းသန်းပေးသည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီမံခန့်ခွဲမှုရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည့်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး၏မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်အကြံပေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး မဲလ်ဘုန်းမြို့နှင့်နိုင်ငံတကာတွင်ဒါရိုက်တာမှမဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် "C" suite ကိုအဆင့်ဆင့်အထိ။ သင်၏မဲလ်ဘုန်းအားသင်၏လျှို့ဝှက်အမှုဆောင်ရှာဖွေမှုကိုအတွေ့အကြုံများစွာရှိသောမဲလ်ဘုန်းမြို့မှကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
တကယ်ပါပဲအကယ်၍ သင်သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့လျှင်အောင်မြင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များလိုအပ်သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအလုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအခမဲ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ HR အတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရန်သင့်အားကူညီနိုင်မည်။ သို့မှသာသင်သည် Melbourne ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
အကူအညီလိုလျှင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိထူထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်း ဘဏ္licensာရေးလိုင်စင် အဘို့အမဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ အီးယူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်လိုင်စင် ဘို့ ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် မဲလ်ဘုန်းမြို့မှ, Crypto ဖလှယ်ခွင့်လိုင်စင် နှင့် ICO သို့မဟုတ် လောင်းကစားလိုင်စင် အမျိုးမျိုးသောတရားစီရင်မှုအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ။
- လုပ်ငန်းလိုင်စင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ
- ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ
- ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ
- Crypto Exchange လိုင်စင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ
- လောင်းကစားလိုင်စင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေ
- ငွေပေးချေမှုကြားခံ မဲလ်ဘုန်းမြို့မှလိုင်စင်
မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်အလုပ်လုပ်မြို့တော် = မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိလက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ - မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိလက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရား
ဘို့ လည်ပတ်ငွေကြေး မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ငွေကြေး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကြွေးရှင်များ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအခွန်အခများနှင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့ဈေးကွက်၏စျေးနှုန်းအရ ၀ ယ်ယူသောစျေးနှုန်းများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲမဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်၊ အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ဘို့ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Due Diligence နှင့်ဆက်စပ်သောသင်လုပ်နိုင်သည်။
ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပစ္စည်းအသစ်များအတွက် ၁၀၀% ရန်ပုံငွေကိုသင့်အားခွင့်ပြုသည်
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပစ္စည်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက် - ပိုသိကြ ဆက်သွယ်ရန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလှည့်ကျအတိုင်ပင်ခံ မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာအမြတ်အစွန်းတိုးဖို့၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့မဲလ်ဘုန်းမြို့ကကူညီ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ငွေသားစီးဆင်းမှု။ စသည်တို့မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ န်ဆောင်မှုများလှည့် စီးပွားရေးတိုးတက်ရန်မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်
မဲလ်ဘုန်းမြို့မှဖောက်သည်များအားအိုင်တီဝန်ဆောင်မှုများပေးခဲ့သည်။ web development မဲလ်ဘုန်းမြို့, eCommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဲလ်ဘုန်းမြို့, blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ မဲလ်ဘုန်းမြို့, software development မဲလ်ဘုန်းမြို့, မိုဘိုင်း app ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လူသိများတဲ့မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာလည်း၊ မိုဘိုင်း application ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဲလ်ဘုန်းမြို့, ဝဘ်ဒီဇိုင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ငါတို့သည်လည်းအခမဲ့ပေး: မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ၊
စျေးနှုန်းချိုသာသော Web Designing Company ကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Web Designing Company Melbourne ရှိ Client`s အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ပေးသည်မှာ Corporate, Responsive နှင့် SEO Optimized ဖြစ်သည်
စျေးနှုန်းချိုသာသော Web Development ကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Web Development Company နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရည်အသွေး၏။
စျေးနှုန်းချိုသာသော App Development ကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့
351+ ကျော်သောအက်ပ်များ နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ App Development ကုမ္ပဏီ.
သင့်ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မဲလ်ဘုန်းရှိကုန်ပစ္စည်းများ - သင်၏အွန်လိုင်းတိုးတက်မှုနှင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့နှင့်နိုင်ငံတကာတွင် ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်အတွက်။
ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီ Melbourne ဖွံ့ဖြိုးမှု, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် devOps များအတွက်တိုင်ပင်။
စျေးနှုန်းချိုသာသော Block Chain Development ကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ
စိတ်ကြိုက် မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလသင့်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း။
မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်စီးပွားရေးစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်တိုးချဲ့ခြင်း၊ သင်သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရုံးခန်းတစ်လုံးသို့မဟုတ်အိမ်တစ်လုံးလိုအပ်နိုင်သည်၊ မဲလ်ဘုန်းအိမ်ခြံမြေလိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ပေါ်တယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ မဲလ်ဘုန်းရှိအိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များနှင့်သို့မဟုတ်မဲလ်ဘုန်းရှိအိမ်ခြံမြေပွဲစားများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအိမ်ခြံမြေတစ်ခုကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်း။ ငါတို့ကြိုးစားကြည့်ပါ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏။ တိုက်ခန်းရောင်းရန် Melbourne
မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားချင်တယ်။ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏။ Melbourne တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
Melbourne တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုစတင်ရန်အတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့၌ရုံးခန်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရုံးခန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရုံးပိုင်ရှင်များနှင့်အခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစိုက်ပျိုးမြေများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ထပ်မံ၍ မရှာဖွေပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအခမဲ့အိမ်ခြံမြေစာရင်းများကိုအသုံးပြုပါ။
မဲလ်ဘုန်းမြို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းမဲလ်ဘုန်းတွင်သင်လိုချင်တာကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်သုံးပါ။ သင်လိုချင်သမျှ၊ သင်လိုချင်တာ!
မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် Classified န်ဆောင်မှုများ
မဲလ်ဘုန်းအဘို့အ Portal ကို
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ပါသို့မဟုတ်မဲလ်ဘုန်းမြို့၌သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့ပါ၊ သင်သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရုံးပရိဘောဂများ၊ မဲလ်ဘုန်းရှိလက်ပ်တော့များ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏တိုက်ခန်းအတွက်ပရိဘောဂများလိုအပ်လိမ့်မည်၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသေးငယ်သောအရာများစွာသည်သြစတြေးလျအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ကြော်ငြာပေါ်တယ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ နှင့်နိုင်ငံပေါင်း 105 ။
မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်အခမဲ့ Classified န်ဆောင်မှုများ
သင်၏စီးပွားရေးအသစ်အတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင် ၀ ယ်ယူရန်အိုင်တီပစ္စည်းကိရိယာများကိုရှာဖွေခြင်း။
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကော်ဖီဖျော်စက်၊ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် Owen စသည်တို့ကိုရှာပါ။
ဥပဒေရေးရာအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေကိုဆက်သွယ်ပါ သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ခွင့် .
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Virtual Office
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်များဖြစ်သော Virtual Office Address Melbourne တွင်စာတိုက်နှင့်ပို့စာများကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့သင်လုပ်နိုင်သည် - သင်၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပြီးပါက၊ Virtual ရုံးမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအကောင့် post-box settings တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးနာမည်နှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့မှသာစာနှစ်စောင်စလုံးကို Virtual ရုံးလိပ်စာရှိအမည်များအောက်တွင်ရနိုင်သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့။
Virtual office Melbourne | Virtual ရုံးသြစတြေးလျ
မဲလ်ဘုန်းမြို့ Virtual Office လိပ်စာသည်ကမ်းခြေရှိစာတိုက်ပုံးတစ်ခုလား။
ဖော်ပြခဲ့သောတည်နေရာအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့မှစီမံခန့်ခွဲသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိရုံးခန်းနေရာ၌သင်၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထုပ်များကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်း။
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ သြစတြေးလျရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ virtual office လိပ်စာများကိုလက်ခံရရှိသည့်စာတိုက်နှင့်စာတိုက်များကိုလိပ်စာများစွာသို့ပို့ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
Virtual Address တွင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ | သြစတြေးလျရှိ Virtual Address
ကျွန်ုပ်၏မဲလ်ဘုန်းမြို့ Virtual Office လိပ်စာသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၏စာပို့လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်၏စာသို့မဟုတ်အထုပ်ဖြစ်စေမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာသို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့ကိုဒီဂျစ်တယ်ပြောင်း။ မဲလ်ဘုန်းအတွက် virtual mailbox မှတစ်ဆင့်သင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ၎င်းနောက်သင်ရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုဖွင့်ရန်၊ စကင်လုပ်ရန်၊ ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်သည်။
Virtual Business Address မဲလ်ဘုန်းမြို့ | inစတြေးလျရှိ Virtual Business Address
bစတြေးလျတွင်ရှိနေလိုသောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Virtual Business လိပ်စာကောင်းသည်။ သင်၏တည်ရှိမှုအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်ငွေအမြောက်အများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုဘဲမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့ရန်သင့်ဆန္ဒအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ virtual PO box သို့မဟုတ် Melbourne ရှိ virtual mail address သို့မဟုတ် Melbourne ရှိ virtual office works များအတွက်အပိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အပိုနှင့်အပိုကုန်ကျမှုများမှာအဘယ်နည်း။
သြစတြေးလျား၌ virtual mailing address သို့မဟုတ်သြစတြေးလျမှ virtual PO box သို့မဟုတ်သြစတြေးလျရှိ virtual office works တို့၏ဖော်ပြချက်အရကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာသောမူဝါဒနှင့်လစဉ်အခကြေးငွေရှိသည်။ ၎င်းကိုနည်းပညာအားဖြင့်officeစတြေးလျရှိ virtual ရုံးဟုခေါ်သည်။ စံအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောအပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုမရွေးချယ်မီအခြေအနေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအမြဲတမ်းအသိပေးပါ။
မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် Virtual Office Workspace | မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် Virtual စာတိုက်လိပ်စာ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် Virtual PO box
သြစတြေးလျရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခြားအမည်များကဘာတွေလဲ။
သြစတြေးလျရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လူတို့နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအမည်များမှာAustraliaစတြေးလျရှိ virtual ရုံးများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများ၊ သြစတြေးလျရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သြစတြေးလျရှိ digital workspace solutions, Australia ရှိ virtual office လိပ်စာ၊ သြစတြေးလျမှ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သြစတြေးလျရှိ virtual လိပ်စာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ သြစတြေးလျရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ သြစတြေးလျရှိငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစာပို့ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊
သြစတြေးလျအပါအ ၀ င်နိုင်ငံတိုင်းသည်မဲလ်ဘုန်းမြို့သို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအဖြစ် virtual office ကိုအသုံးပြုရန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ရှင်းလင်းချက်များအတွက်ထိတွေ့ရယူပါ။
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Virtual စာတိုက်လိပ်စာ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Virtual Office Mailing Address မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစာပို့ခြင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ မဲလ်ဘုန်းမြို့အဘို့
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Start-ups များအတွက်အထူးပံ့ပိုးမှု
အကယ်၍ သင်သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်စတင်နေပြီဆိုလျှင်၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့နှင့်နိုင်ငံတကာတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံများအနေဖြင့်အထူးအထောက်အပံ့များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ One Stop Shop
Melbourne ရှိ Client Acquisition ပံ့ပိုးမှု
ငါ millionmakers.com နှင့်အတူမဲလ်ဘုန်းမြို့စီးပွားရေးသတင်းများကိုစာရင်းသွင်းသင့်ပါသလား။
ဘို့ နောက်ဆုံးပေါ်မဲလ်ဘုန်းမြို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသတင်း စီးပွားရေးဥပဒေများ Melbourne, Melbourne စတင်ဘို့ စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်းမဲလ်ဘုန်းမြို့, နောက်ဆုံးပေါ်မဲလ်ဘုန်းမြို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသတင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန် စီးပွားရေးဥပဒေ, မဲလ်ဘုန်းမြို့ စီးပွားရေးဥပဒေများ, စီးပွားရေးဥပဒေ မဲလ်ဘုန်း, စီးပွားရေးဥပဒေများ မဲလ်ဘုန်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ မဲလ်ဘုန်း, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အသစ်များ မဲလ်ဘုန်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူး မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးသစ်မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ, မဲလ်ဘုန်းမြို့ နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ, နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ မဲလ်ဘုန်းမြို့, မဲလ်ဘုန်းမြို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေများ နောက်ဆုံးသတင်းများ, မဲလ်ဘုန်းနောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များ, မဲလ်ဘုန်းနောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများ, နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများမဲလ်ဘုန်းမြို့, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းသစ်များမဲလ်ဘုန်းမြို့အသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်း Melbourne, မဲလ်ဘုန်းမြို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းသစ်များမဲလ်ဘုန်းမြို့, စီးပွားရေးဆောင်းပါးမဲလ်ဘုန်းမြို့, မဲလ်ဘုန်းမြို့ စီးပွားရေးဆောင်းပါးစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်မဲလ်ဘုန်းမြို့ စတင်တည်ထောင်သည် မဲလ်ဘုန်း, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သစ် မဲလ်ဘုန်းမြို့, မဲလ်ဘုန်းမြို့ စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်း မဲလ်ဘုန်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်းပါးများ မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်းပါးများ၊ မဲလ်ဘုန်းစီးပွားရေးသတင်းများ၊ ယနေ့မဲလ်ဘုန်းမြို့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမဲလ်ဘုန်း, မဲလ်ဘုန်းမြို့ စတင်တည်ထောင်သည်၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့၌သတင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမည်သို့စတင်မည်၊ မဲလ်ဘုန်းသတင်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမည်သို့စတင်မည်၊ မဲလ်ဘုန်းသတင်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တစ်ခုမည်သို့စတင်မည်၊ စတင်ရန်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေး မဲလ်ဘုန်းမြို့ update ကို, စီးပွားရေးအစီအစဉ် မဲလ်ဘုန်းမြို့သတင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း မဲလ်ဘုန်းမြို့ updates များကို, အသေးစားစီးပွားရေး သတင်း Melbourne၊ Melbourne အသေးစားစီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးသတင်း မဲလ်ဘုန်း, စီးပွားရေးဝဘ်ဆိုက် မဲလ်ဘုန်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မဲလ်ဘုန်းမြို့, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ မဲလ်ဘုန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။